ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: December 2010
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်သလဲဆိုတဲ့ အတွေး အိမ်မက်မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ တစ်ခုခုစီတော့ ရှိနေစမြဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲကမှ လောကကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီးတွေ့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင်အပြိုင်ကြဲလိုက်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကို ချနင်းပစ် လိုက်ရတာမျိုး.. ကိုယ်တိုင်စွန့်လွတ်လိုက်ရတာမျိုး.. ရင်နာနာနဲ့ကျောခိုင်းလိုက်ရတာမျိုး ကြုံလာတဲ့အခါတွင်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာရဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲကလိုချင်တဲ့စိတ် တန်ဖိုးနဲ့အမျှ စိတ်တွေနာကျင်ရတော့တာပါပဲ။
ဒါဆိုရင် ကျွန်မငယ်စဉ်က ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ ဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့လိုတာပေါ့။ ကျွန်မလိုချင်ခဲ့တာက နဲနဲတော့ ဆန်းတယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကြုံလာရတဲ့ ဘ၀ ကံနှင့် တိုက်ရိုက်ကြီး သက်ဆိုင်နေတာကိုး။ ဒါဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ကိုနဲနဲတော့ ပြောပြ ဖို့လိုတာပေါ့။
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ့်ကံအကြောင်းပြောရရင်တော့ ကံမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ ငယ်ငယ်လေးထဲက ကျွန်မချစ်လွန်းတဲ့ ကျွန်မသံယော ဇဉ်ကြီးခဲ့တဲ့ လူတွေအားလုံးက ကျွန်မဘေးနားကနေ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ခွဲသွားကြတာကြီးပဲ။ပထမက ဖိုးဖိုး ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ၃ တန်းလောက်အရောက်မှာ ဆုံးသွားတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီးပါ။ ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး လူကြီးတွေပြောတာကတော့ အစာအိမ်သွေးကြော ပေါက်ပြီးဆုံးတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ပြီးတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲက အဖေ အမေ နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအဖိုး ဒီအဖွား ဒီဦးလေး အဒေါ်တွေကြားထဲမှာလဲ ဖူးဖူးမှုတ်ပြီး ချစ်ခံလာရတာ။ ဒါပေ...မယ့် ဖိုးဖိုးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်း အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေကလဲ ယောက်ကျားယူ မိန်းမယူဆိုတော့ ကျွန်မကို ဖွားဖွားက အဖေ အမေတွေစီပြန်ပို့တော့တာပဲ။အဲဒီမှာ အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့ ဘာလို့နေခိုင်းတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါလာပြီ။ အဖေနဲ့အမေက ခဏခဏ ရန်ဖြစ်တာမို့ တော်ကြာရန်ဖြစ်ပြီး အဖေအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားရင် မြေးဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကိုပါ ခေါ်သွားမှာစိုးတာကြောင့် အဖိုးက ကျွန်မ ၉ လသမီးလောက်ထဲက ခေါ်ထားတာ။ အဖေနဲ့အမေက တွေ့ချင်ရင် အဖိုးအိမ်လာကြည့်။ အဲလို။ ခုတော့ ကျွန်မ အဖေ၊အမေဆီ ပြန်သွားရပြီဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်. ပြီးတော့ ညီမလေးကလဲ ရှိလာပြီးဆိုတော့ အဲဒီမှာ ကျွန်မစပြီး မပျော်တော့ဘူး။ ခက်တာက ညီမလေးနဲ့ အဖေ အမေနဲ့ကတူတူ နေနေကြဆိုတော့လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖေအမေက စဉ်းစားလိုက်ရင် ညီမလေး အတွက်အရင် စဉ်းစားကြတာပေါ့။ ဒီလိုအတွေးမျိုးက ခုအသက်ကြီးမှ စဉ်းစားတာလေ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဖေနဲ့အမေက ညီမလေးကို ငါ့ထက်ပိုချစ်တာ။ အဲလိုတွေးတော့ ဒုတိယ ကျွန်မချစ်တဲ့ အဖေနဲ့အမေက ကျွန်မကို မချစ်ဘူးပေါ့။ဒီကြားထဲ အဖေအမေ ရန်ပွဲကလဲ ကြမ်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့။ မပျော်တော့ဘူး။ ၅ တန်းဆိုကလေးသာသာရှိသေးတဲ့ ကျွန်မ ဘယ်လောက်ထိအောင် စိတ်တွေပူလောင်ခဲ့ရသလဲဆိုရင် ၅ တန်းကျောင်းပိတ်တော့ မိဘတွေက မေသီလရှင်ဝတ်ပေးတယ်။ ရွှေမင်းဝံ ကျောင်းတိုက်မှာ။ မနက်ဆိုဘုရားအစောကြီးထရှိခိုး။ ပြီးရင် တရားထိုင် ။ပြီးရင်စာသင်။ အဲဒီမှာ သူများတွေ ၁ ပတ်လောက်ဝတ်ပြီးလူထွက်ကြတာ။ ကျွန်မက ၁ လနေလဲမထွက်ဘူး ၁ လခွဲကျော်လဲမထွက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆို တော့ ကျွန်မစိတ်တွေ တော်တော်အေးချမ်းတာ။ အဲဒီလိုနေရတာကို ကျွန်မနှစ်ခြိုက်မိတာကိုး။ ကျွန်မက လူပြန်မထွက်တော့ဘူးလို့ကို ပြောတာ။ အဖေနဲ့အမေက အဲဒီတော့မှ ကျွန်မရင်ထဲက ထိခိုက်မှုကိုမြင်တာ။ ကျွန်မကို ငိုပြီး သမီးရယ်ငယ်ပါသေးတယ် သမီးကြီးလို့ စာတွေသင်ပေးပြီးတော့ မှ မေသီလရှင်ပြန်ဝတ်လဲ အမေတို့ခွင့်ပြုပါ့မယ်ဆိုပြီး ချော့မော့ပြီးပြန်ခေါ်မှ ကျွန်မလဲ လူထွက်ပြီး မိဘတွေနဲ့ ပြန်လိုက်တာ။ဒါကျွန်မ ၅ တန်းနော်။တကယ်ဆို အဲဒါကလေးသာသာရှိသေးတာ။ အဖေနဲ့အမေက ဒီတော့မှ ကလေးတွေရှေ့ ရန်ဖြစ်တာ တို့ ဘာညာကို ဆင်ခြင်ကြတာ။ ဒါပေမယ့် ညီမလေးနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ကျွန်မက အမြဲဒုတိယ။ နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ် ညီမလေးငါတန်းရောက်တော့ အထက်တန်းကျောင်းပြောင်းတက်ရတယ်လေ။ အဲဒီမှာ ညီမလေးနဲ့ကျွန်မ တစ်ကျောင်းထဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်ကစပြီး ကျွန်မ ၁၀ တန်းနှစ်ကျောင်းပြီးတဲ့ အထိ ခံစားရတဲ့သောက။ ညီမလေးက ထမင်းချိုင့်မကိုင်ချင်ဘူးတဲ့။ ဒီတော့ မိဘတွေက လေးဆင့်ချိုင့်ဝယ်ပေးတယ်။ ကျွန်မက အဲဒီချိုင့်ကိုဆွဲပြီး ကျောင်းသွားရတယ်။ မုန့်စားဆင်းချိန်ကျ ညီမလေးဆီအရင် ထမင်းချိုင့်သွားပို့ရတယ်။ သူက ကျောင်းကိုစောသွားတာကိုး။ဒီတော့ထမင်းချိုင့်က အမြဲ ကျွန်မစီမှာ။ သူစားပြီးတော့မှ ကျွန်မက ထမင်းချိုင့်ကို အတန်းထဲပြန်ယူလာ ပြီးမှကျွန်မစားရတယ်။ ဒါက အများကြီးထဲက မှ အပေါ့ပါးဆုံးတစ်ခုကို ကျွန်မ ပြောပြတာ။ မိဘတွေကို မကိုင်ချင်ဘူး ပြောပေမယ့် ညီမလေးက မသိသေးလို့ပါ ဆိုတာနဲ့ပဲ ကျွန်မအဲဒါ ၁၀ တန်းအထိ အလိုပဲလုပ်ခဲ့ရတာ။ မိဘတွေကလဲ ဘယ်လောက်ထိ ကျွန်ကိုဂရုစိုက်ခဲ့လဲဆိုရင် ၁၀ တန်းကျွန်မတက်နေတဲ့ ကျူရှင်နေရာ ခုချိန်ထိ ဘယ်နေရာလဲ သူတို့မသိဘူး။ ဒါဆို ညဘက် သူများမိဘတွေလို လက်ဖက်လေးသုတ်ပေး ကော်ဖီလေးဖျော်ပေးလားဆိုတော့ စာမေးပွဲသာဖြေရော တစ်ခါမှ အဲလိုဂရုစိုက်တာမခံရဘူး။ ပိုဆိုးတာက ညဘက်ဘယ်လောက်ပဲစာကျက်လို့ ညည့်နက်နေနေ မနက်ဆို ၆ နာရီအမှီထပြီး ဈေးသွား အမေတို့အလုပ်ထမင်းချိုင့်ရော ကိုယ့်အတွက် ကျောင်းထမင်းချိုင့်ရော ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အမှီထချက်ရတယ်။ အဲလို..
စိတ်ထဲမှာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ငယ်ကလဲ ငယ်သေးတာကိုး။ ၀မ်းနည်းတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲလဲပြီးရော အမေ့ရဲ့ညီမတစ်ဝမ်းကွဲ မအူပင်က အဒေါ်တွေ အိမ်သွားနေတော့တာပဲ။ ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင် ၁ နှစ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်။ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေ ထွက်ခါနီးမှ ပြန်လာတာ။ အဲဒီမအူပင်အိမ်က အစ်မတစ်ယောက်ကလဲ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အရေးပါတဲ့တစ်ယောက်ပဲ။ ညီအစ်မ အရင်းထက် ကျွန်မသူ့ကိုပိုချစ်တယ်။ ညီမလေးက အနိုင်ကျင့်သလောက် သူက ကျွန်မကိုအနစ်နာခံတာကိုး။ ပြီးတော့ အဲဒီအိမ်က အဒေါ်တွေက ကျွန်မရဲ့မမွေးစားမိဘလို့ကိုပြောလို့ရတယ် သူတို့တွေက အရမ်းဖြူစင်ပြီး ကျွန်မမိဘထံမှ လိုချင်မေတ္တာတွေ သူတို့စီက ရတာကိုး။ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ နေရာ ပျော်တယ်ဆိုတော့ နေတာပဲ။ ၁ နှစ်လောက်ကြာ ပြန်မလာလွန်းတော့မှ အမေတို့ က ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ် ပြန်လာခဲ့ပါ ဒီအဖေ အမေ ရှိတာမှတ်မိသေးရဲ့လားဆိုပြီး ငိုပြီးပြောတော့မှ ကျွန်မ အိမ်ပြန်ရောက်တာ။
ဒါနဲ့ ကျွန်မချစ်တဲ့ အဲဒီအစ်မကလဲ ဘာမပြောညာမပြော ယောက်ကျားယူရော။ ၀မ်းနည်းတာပေါ့။ ကိုယ့်ဘ၀ထဲက တစ်ခုခုလျှော့သွားသလို ခံစားရတာ။ အဲဒီအချိန်က တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ပေါ့။ အဖေနဲ့အမေတို့ကလဲ အဲဒီအချိန် ညီမလေးကအလိုလိုက်လွန်းလို့ ဆိုးလာတော့ ကျွန်မကို လိမ္မာတယ်ဆိုပြီး နဲနဲသိတတ်လာတဲ့ သဘောလေးပါလာတယ်။ ကဲဒါနဲ့ ပညာစုံတော့ ချစ်သူလေးလဲ ရလာပြီ ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် ချစ်ရတာတော့ ကြောက်သား။ သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ သူတွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ ခွဲသွားတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာကို တားလို့မှမရပဲ။ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ သူလဲချန်ထားခဲ့တာပါပဲ။
အဲဒီအချိန်ကြတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆင်ခြင်မိသွားပြီး။ ခုလိုခံစားနေရတာတွေ သောကဗျာပါဒ ပူလောင်မှုတွေကို အေးချမ်းချင်တဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်လာတာ။ ဘာလဲဆိုတော့ မေသီလရှင် ပြန်ထွက်လာပြီထဲက ကျွန်မစိတ်ထဲက ပျောက်ပျက်မသွားတာက အဲဒီလိုတရားနဲ့ နေရတာ အေးချမ်းလိုက်တာဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး အမြစ်တွယ်လာတာ ငယ်ငယ်လေးထဲက။ နေ့တိုင်းဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းပင်ပန်း ညဘက်ဆို ဘုရားသောက်တော်ရေလဲ ဘုရားရှိခိုး အဲဒါကတော့ ကျွန်မအမြဲလုပ်ဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့ကို အဲဒီတစ်နာရီလောက် ရယူလိုက်တဲ့ စိတ်အေးချမ်းမှုကို နောက်ဖြတ်သန်းရမယ့် နေ့တွေအတွက် ကျွန်မမှာအားတွေဖြစ်လာတယ်။ စိတ်တွေလဲ ရင့်ကျက်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်မအလုပ်ကလဲ အဆင်ပြေလာ မိသားစုက ကျွန်မအပေါ်အားကိုးလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ မိဘတွေကျွန်မကို ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း မြင်တတ်လာပြီ။ အရာရာကို ကျွန်မသိတတ် မြင်တတ် နားလည်လာတတ်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ဘ၀အရ ..ရလာတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတဲ့ အရာတွေအားလုံးအပေါ်မှာတော့ ငါပိုင်လိုက်တာလို့ မချစ်တတ်တော့ ဘူး။ တစ်နေ့ကျ သူတို့က အဝေးကိုခွဲသွားကြအုန်းမှာပဲလို့ စိတ်ထဲမှာထင်နေတာ။ခုလောလောဆယ်တော့ မိဘဆိုတာ ကျွန်မအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသေးတာမို့ ဘ၀ကိုကြံ့ကြံ့ခံလို့ ရင်ဆိုင်အုန်းမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မပိုင်သွားတဲ့နေ့ အဲဒီနေ့ကျရင်တော့ ကျွန်မဖြစ်ချင်နေတာက
အေးချမ်းတဲ့ တရားဓမ္မကို ကျွန်မ အားထုတ်ချင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်ဘ၀ တွေများ ဒီလိုမျိုးစိတ်သောကတွေကို ကျွန်မမခံစားချင်တော့ပါ။ ကြောက်တတ်သွားပါပြီ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်မတတ်နိုင်သလောက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်နေစဲပါလို့ နိဂုံးချုပ်ရင်း..
ကိုအုပ်ကြီးတက်(ဂ်) ထားတဲ့ "ဖြစ်မလာခဲ့သော ... ဖြစ်ချင်နေတာ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ပို့(စ်)လေးတစ်ပုဒ် ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ကြာတော့ကြာသွားပါတယ်။ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကျွန်မကြိုးစားပြီး ရေးခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်နေရင်းနဲ့ အမှားလေးများပါရင်တော့ သည်းခံပေးပါလို့။
Funny Faces Ghost Halloween Images
ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေတဲ့ အကာလညအချိန်။ တစ်ချက်တစ်ချက် လေအဝှေ့ ရှဲကနဲရှဲကနဲ သစ်ကိုင်းကြီးတွေလှုပ်နေပုံမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေများ လက်ကြီးတွေကားပြီး ပျော်မြူးနေသလားထင်ရတယ်။လူအများခေါင်းချလို့ အိပ်တဲ့အချိန်ကိုး။ဒီကြားထဲ ချမ်းပိုနေတာက ဆောင်းအ၀င်ဆိုတော့ လူအများကွေးကောင်းတဲ့အချိန်။ ဒီအချိန် ညရေးညတာ ထစရာရှိတာတောင် မရမကမိုးအလင်း အိပ်ကြသေးတာ။ ဒါပေမယ့် ညမှောင်မှောင် ခပ်အေးအေးမှာ အရိပ်တစ်ခု လှုပ်ရှားနေတာ။ ဟော. . ခုပဲကြည့် အရိပ်ရဲ့ လက်ကမြှောက်ကနဲ ကြိုးတန်းမှာလှမ်းထားတဲ့ ညသ်ိပ်ပုဆိုးတစ်ထည်လဲ အရိပ်လက်ထဲ လျှောကနဲ။ ကိုရွှေသူခိုးက ခိုးမဲ့သာ ခိုးလိုက်တာ ထည့်စရာပါပုံမရဘူး။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာပိန်သေးသေးမှာ အနံကြီးကွင်းကျယ် ပုဆိုးကို မရမကလုံးဝတ်ပြီး ခါးတောင်းတောင် တိုအောင်ကျိုက်လိုက်သေးတာ။ဒါတောင် ပုဆိုးကဒူခေါင်းနီးနီး ခါးပုံစက အထုပ်နဲ့အထည်နဲ့။ အထုပ်နဲ့အထည်နဲ့ဆိုလို့ တစ်လွဲတော့မတွေးနဲ့ ကြီးနေတဲ့ပုဆိုးကို မရမကလုံးထွေးခေါက်ပြီး ၀တ်ထားတာကို ပြောချင်တာ။ဒီကြားထဲ နှင်းငွေ့နဲ့ ပုဆိုးက ရေစိုသလိုအေးစက်စက်။ ဒါကိုပင် ကိုသူခိုးက ကျေနပ်သွားသလိုနဲ့ နှုတ်ကနေတိုးတိုးပြောနေသေးတာ..
(သူခိုး) ဆောရီးဗျာ ကျုပ်လဲ အေးအေးနဲ့အိပ်တာ ပြန်နိုးတော့ နောက်ကျနေတာနဲ့ ကျုပ်ပုဆိုးမေ့ခဲ့တယ်ဗျာ။မရည်ရွယ်ပေမယ့်
ခိုးမိသွားတာ..ဟီးဟီး..၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုက အပြင်ထွက်မှ တော်တော်အေးသကိုးဗျ။
ပြောလဲပြော သူ့ပုံစံလဲသဘောကျနေပုံနဲ့ တစ်ခွီးခွီးကြိတ်ရယ်နေသေး။ပြီးတော့ သူနေ့လည်က ရွာထဲမယောင်မလည်နဲ့အခြေအနေ ကြည့်ထားတဲ့ အိမ်ဘက်ကိုခပ်သွက်သွက်လှမ်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ သူကခိုးမယ်ဆို အဲဒီအိမ် အခြေအနေကို အရင်ကြည့်တာ။ သူ့ဗလနဲ့ က ချောင်ချောင်ချိချိ ခိုးလို့ရတဲ့ အိမ်ရှာရတာ။ သတ္တိနဲတယ်ပဲပြောပြော ရဲတယ်ဆိုကျုပ် ဓါးပြလုပ်စားမှာပေါ့ဗျ။ အဲဒီအိမ်မှာနေတာက အဖွားကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ ကောင်လေးပဲရှိတာလို့ ကျုပ်သိခဲ့ရတယ်ဗျ။ ကျုပ်မျက်စိအကျဆုံးကတော့ဗျာ အဲဒီအိမ်က အဖွားကြီးဝတ်ဝတ်နေတဲ့ ရွှေဆွဲကြိုး ခပ်ကြီးကြီးတစ်ကုံးရယ် ရွှေလက်ကောက် သုံးလေးကွင်းလောက်ရယ် မျက်စိထဲကကိုးမထွက်ဘူး။ တစ်ခါ ကျုပ်တို့ရွာ အလှူလာတုန်းက ဒီအဖွားကြီး ၀တ်လာတာဗျ။ ဒီထဲက ကျုပ်စနည်းနာနေတာ။ ခုတော့ ကျုပ်အဲဒီအိမ် ၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက် ကျုပ်လေ့လာထားပြီးသား။ ဟော ပြောရင်းဆိုရင်း အိမ်နဲ့နီးလာပါရောလား။ ကဲပြောနေကြာတယ် လုပ်ငန်းလေးမြန်မြန်စမယ်ဗျာ။
ကဲ ..သူခိုးလဲ အိမ်ထဲရောက်.. ရှာဖွေရေး စတော့တာပေါ့။
သူလဲအိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကနေ၀င်ပြီး အဖွားကြီးအိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းနားကိုသူခိုးခြေသံနဲ့ ကပ်လာခဲ့တယ်။ဟော..အဖွားကြီး အိပ်ခန်းပေါက်နားရောက်တော့မယ်။ ကျုပ်လဲ ဆွဲကြိုးကြီးနဲ့ လက်ကောက်တွေ မျက်စိထဲမြင်ပြီး နောက်ဖေးခန်းအလယ်ဆင့်ကနေ အဖွားကြီး အိပ်ခန်းဘက်ကူးမယ်ပေါ့ ခြေကိုအလှမ်း။ ဟဲ့..ပလုတ်တုတ်..ဘာကြီးတုန်း...အ်ိမ်ပြတင်းပေါက်ကကျလာတဲ့ ရိပ်တိတ်တိတ် လရောင်ကြောင့် မှောင်မှောင်နဲ့မည်းမည်းထဲ.. ခပ်ထွားထွား ကုန်းကုန်းကွကွ အရိပ်ကြီးတစ်ခု အမွှေးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေနဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ခြေသလုံးပိန်ပိန်ကို တိုးနေပါလား။ ဟား... လူမိပြီထင်တယ်. စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ ပြာကနဲ ဘာမှမစဉ်းစားနိုင် ဘူး ကျုပ်လှည့်ပြေးဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျုပ်နောက်ကျသွားပြီ။ အရိပ်ကြီးရဲ့ လက်တစ်ဖက်က လေပေါ်ကို ရုတ်တရက်မြှောက်တက်လာပြီ ကျုပ်ခြေထောက်ကို ဖမ်း ဆွဲထားလိုက်တယ်။ကျုပ်လဲ အားကုန်ရှိသမျှ ရုန်းကြည့်တယ်။ ဒီအချိန်ကျုပ်စိတ်ထဲကိုဝင်လာတာက အဲဒီအရိပ်ကြီးက လူလား ဘာလဲ..
လူဆိုရင်တော့ ခုလောက်ဆိုအော်တော့မှာပေါ့။ ဒီလို အသံမထွက်ပဲ နေမှာမဟုတ်။ ဒါဆို... ဒါဆို...ဒါဆို...
ခုမှကျုပ်ပိုသတိထားမိလာသလိုပဲ ကျုပ်ကိုဖမ်းဆွဲထားတဲ့ လက်ကြီးက အေးစက်စက်ကြီးပဲ။
အ..အ...ရှင် ဘုရား ကယ်တော်မူပါ။ခိုးတဲ့တစ်ပါးသီလပဲ ကျိုးတာပါဘုရား။
ကျုပ်လဲရုန်းရင်း ကန်ရင်း ရသမျှဘုရားစာ အကုန်ရွတ်တာ။ဘယ်လိုမှ အဲဒီလက်ကြီးလက်က မလွတ်ဘူး။ ကျုပ်အသံထွက်ပြီး ကယ်တော်မူပါလို့အော်လိုက်ရင်လဲ လူမိမှာကတစ်ကြောင်း။ ကျုပ်တစ်ကိုယ်လုံးတော့ အေးစက်ပြီး ကြက်သီးတွေထ ဒီလောက်ချမ်းချမ်းထဲ ချွေးတွေများထွက်လာလိုက်တာ ရေချိုးသလိုပဲ။ စိုစိုကိုရွှဲ။ ရုန်းရင်းကန်ရင်း အဲဒီအရိပ်မည်းမည်းကြီးက
ကျုပ်ရဲ့ ဖမ်းထားတဲ့ ခြေသလုံးပေါ်ကို သရေလိုဘာလိုလို အရည်ခပ်ချွဲချွဲတွေကျလာတယ်။ ဘုရားဘုရား ဒါဆို သေချာပြီး..သရဲလား သဘက်လား ကျုပ်မရတော့ဘူးဗျာ ကြောက်လွန်းလို့ မျက်လုံးတွေလဲပြာလာပြီး အသားတွေလဲ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး ကျုပ်နောက်ဆုံးရုန်းတော့ မယ် ရအောင်အားနဲ့ရုန်းမယ်.
ဒါနဲ့ ကျုပ်လဲရှိသမျှအားတွေ အကုန်စုပြီးရုန်းမယ်လို့ အပြင် ဖမ်းထားတဲ့ ခြေထောက်ကလဲစူးကနဲ့ နာကျင်မှုနဲ့အတူု အကိုက်ခံရပြီ။ အိုး....ဘာပြောကောင်းမလဲ...
"ကယ်တော်မူကြပါဗျို့..ကျုပ်ကိုသရဲ ကိုက်နေလို့ ကယ်တော်မူပါ။ အား..........အား...အား"
လူခြေတိတ်ဆိတ်တဲ့ သည်လိုအချိန်မျိုးမှာ သူခိုးရဲ့ ကြောက်လန့်တစ်ကြားနဲ့ ငယ်သံပါအောင်အော်သံကြီး ကြောင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေလဲ နိုးလာကြပြီး သူခိုးဝင်ခိုးတဲ့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နားကို ၀ိုင်းလာကြတယ်။
(ရွာသားများ) ဟေ့ ဒေါ်မှင်...ဒေါ်မှင်.. ဒေါ်မှင်ဘာဖြစ်တာတုန်း မှန်အိမ်မီးလေး ဘာလေးထွန်းပါအုန်းဗျ။
ဒီလိုရွာသားတွေအသံကြားတော့မှ အိမ်ထဲကနေ အသံတစ်သံနဲ့အတူ အဖွားကြီးတစ်ယောက် မီးမထွန်းရသေးတဲ့ မှန်အိမ်ကိုင်ပြီး ထွက်လာတယ်။
(ဒေါ်မှင်) ကျုပ်လဲသိဘူးတော်..အိမ်နောက်ဖေးနားကနေ အသံကြားတာပဲ။ တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ သွားမကြည့်ရဲဘူးတော့။
ကျုပ်သား ငပွေး ကလဲ အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ် ဆို ဘယ်မှာလဲကိုမသိဘူး။ ရှာကြပါအုန်းတော်.
အဖွားကြီးလဲ ဆံပင်စုတ်ဖွား ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နဲ့ အသံတုန်တုန်နဲ့ပြောရှာတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ရွာသားတစ်ယောက်က
(ရွာသား) အာ..ကြီးတော်တို့ကလဲ အိမ်နောက်ဖေး ကိစ္စအရင်ရှင်းပါအုန်းဗျ။ ပြီးတော့မှ ကြီးတော် ရဲ့သားကိုရှာ ဟုတ်ပြီလား။
ကဲ ရွာသားတွေ မီးတုတ်တွေထွန်းပြီး ခြံထဲကနေ အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကို ပတ်ဝင်မယ်။ အားလုံးသွားကြမယ်ဟေ့..
အေး သွားကြမယ်ဟေ့ တစ်ခုခုဆို အားလုံးအသင့်ပြင်ထားနော်..
ဒီလိုနဲ့ ရွာသားတွေ ခြံထဲကနေပတ်ဝင်ပြီး သူခိုးဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ အိမ်နောက်ဖေးတံခါးကို အသာလေး ဆွဲဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ...
ရွာသားတွေ ဟင်..အို ..ဟာ ...ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း.. ရွာသားတွေရဲ့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အာမေဋိတ်သံတွေကြားလိုက် ရတယ်.
ဟုတ်ပါတယ်. အ်ိမ်၇ှင်ဒေါ်မှင်ရဲ့သား ငပွေးက ပလက်လန်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေသလုံးကို ကိုက်လျှက် မှောက်လျက် အနေအထားနဲ့ သတိမေ့နေခဲ့သလို အကိုက်ခံရသော မျက်နှာစိမ်းလူကလဲ သတိလစ်လို့နေပါတယ်.
နှစ်ယောက်စလုံးကို လူတွေက တော်တော်ခြေမကိုချိုး နှာနပ် ခေါင်းခေါက်တော့မှပဲ တစ်အင်းအင်းညည်းပြီး သတိပြန်လည်လာကြပါတယ်။ ဒါတောင် သူခိုးက အရှိန်မသေသေးသလိုနဲ့ သရဲ ..သရဲ ဆိုပြီးထပြီးထွက်ပြေးမလို လုပ်တာကြောင့် ရွာသားတွေ အားလုံးကငြိမ်အောင် ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အမှန်တစ်ကယ်တော့ သူခိုးက ကံကြမ္မာဂြိုလ်ဆိုးနဲ့ မညှာမတာတွေ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ သူခိုးရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကိုတော့ ရေးပြီးဖြစ်လို့ ခုတော့ ငပွေးရဲ့ အတွေးလေးကိုလဲ ရှုစားကြပါလို့။ ငပွေးက ဒီလို...
တောက်ဒီနေ့ညမှ ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး ညရေးညတာ ရေအိမ်သွားချင်တာ ဘယ်လိုမှ အောင့်ထားလို့မရ။ သူ့အမေဒေါ်မှင်ကို တော့သူအားကိုးမနေချင်။ သူ့အမေက အိပ်ပြီးဆို မြို့ကဒီဂျေဆိုတာကြီး လော်တပ်ပြီးပွတ်တောင် မနိုးဘူး။သူဟိုဘက်လိမ့် ဒီဘက် လိမ့်မရဘူးရေအိမ်သွားမှကိုဖြစ်မယ်။ ခက်တာက သူတစ်ယောက်တည်းမသွားရဲ။ တော်ကြာသရဲနဲ့ တိုးနေရင် သူအောင့်ထားတာတွေ ထွက်ရုံမက အသက်ပါပါသွားနိုင်သည်။ ဆက်အိပ်လို့လဲမရ။ထရတော့မည် ဒီတော့ သူစဉ်းစားသည် သရဲနဲ့တွေ့ရင် သူဘာလုပ်မလဲ..
သူကြားဖူးတဲ့ သရဲတွေကတော်တော်ကြီးကြသည် ကိုချက်ကြီး ပြောတာများ အရပ်ကထန်းပင်လောက်ဆိုပဲ။မျက်လုံးက ဇကောလောက်ရှိတယ်တဲ့။ လျှာဆို နီရဲပြီးတိုင်းလို့မရလောက်အောင်ကိုရှည်တာတဲ့။ အစွယ်ကြီးတွေဆိုလဲပြူးနေတာပဲတဲ့။တွေးရင်နဲ့ တောင်သူတော်တော်ကြောက်လာသည်။ ပိုပြီးတော့လဲရေအိမ်သွားချင်လာသလိုလို သရဲကိုသူကြောက်တာအဲဒါတွေကြောက်တာဖြစ်သည်။ ဒါဆိုမကြည့်ရင် အဲဒါတွေမြင်ရမည်မဟုတ်။ ဒီတော့ သူမျက်စိမှိတ်ပြီးသွားမည် ဘာဖြစ်ဖြစ် မျက်စိလုံးဝမဖွင့်။ ပြီးတော့ သရဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မှာကို သူကြောက်သည် ၀င်တိုက်မိနေရင် ဒုက္ခ။ ဒီတော့ ၀င်မတိုက်မိအောင် လေးဘက်ထောက်ပြီးသွားမည်။ ဒါဆို မျက်နှာချင်ဆိုင်မတွေ့ ကံကောင်းလျှင် သရဲ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားမှ သူလွတ်မည်။ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း ဟုတ်သလိုလိုဖြစ်လာသည်။ ဟုတ်တယ် အဲလိုလုပ်ပြီး သွားမယ်။
ဒါနဲ့ပဲငပွေးတစ်ယောက် ခြင်ထောင်ကိုမ မျက်လုံးကိုမှိတ် လေးဘက်ကိုထောက်ပြီး ချီတက်လာသော အချိန် သူခိုးကလဲ အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကနေတစ်ဆင့် အ်ိမ်မကြီးကို အလှမ်း အပေါက်ဝမှာ သူခိုးနှင့်ငပွေး ငပွေးနှင့်သူခိုး ဆုံမိကြချင်းဖြစ်သည်။
သူ့ကိုယ်သူအားတင်းပြီး သူဖော်တဲ့ဆေးသူသောက်ပြီး ထလာသောငပွေးတစ်ယောက် သူ့ခေါင်းနှင့် သူခိုးခြေထောက်တိုက်မိလိုက် တာနှင့်ငပွေးတပ်အပ်ထင်လိုက်သည်။ သရဲခြေထောက်နှင့် သူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ တိုက်မိပြီ။မျက်လုံးလဲ သူဖွင့်မကြည့်ရဲ။ သူလဲကြောက်အားလန့်အား ဆွဲမိဆွဲရာ လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။ ဘာလဲတော့မသိ အမွှေးဘလက်ပွနှင့် ခြေလားလက်လား မကွဲပြားသောဟောကြီးအား သူဆွဲမိသည်။ ဆွဲမိပြီဆိုမှတော့ သူမလွတ် သူ့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ တွန်းကန်ပြီး အဲဒါကြီးလှမ်းဖက်ထားမိသည်။နောက်ဟိုစမ်း ဒီစမ်းလိုက်စမ်းတော့ ဘာမှမတွေ့။ သူလဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိ.ပြောရင်းဆိုရင်း သူကြိတ်ပြီးငိုနေမိသောကြောင့်သူ့ပါးစပ်မှ သရေများကျကာသာလာ၏။ အသံလဲမထွက်ရဲ။ သူ့ကိုကိုက်စားလိုက်ရင် ဒုက္ခ။ ဒါနဲ့ သူလဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတုန်း သူဖမ်းဆွဲထားသော အရာကြီးက အတင်းရုန်း၏။ ဒီပုံအတိုင်းဆို လွတ်သွားတော့မယ်။ မထူး သူမကိုက်ခင် ကိုယ်ကဦးအောင် ကိုက်မည်။ ဒီလိုအတွေးနဲ့ ငပွေးက အသားကုန် ကိုက်လိုက်သော်..
သူခိုးလဲ သတိလစ်ကာ ဘိုင်းကနဲအလှဲ ငပွေးလဲ မှောက်လျက်လှဲ သရဲတော့ သူ့ကို ဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးဆိုသော အတွေးနှင့် ပြိုင်တူ သတိလစ်သွားလေတော့သည်။
ထို့နောက် ရွာသားအားလုံးနဲ့ ရွာလူကြီးတွေ ရှေ့မှာ သူခိုးကိုမေးလိုက် ငပွေးကိုမေးလိုက်နှင့် ဇာတ်ရည်လည်သော်..
နားထောင်နေသော ရွာလူကြီးများ အသောမသတ်နိုင်အောင်ရီကြ၏။ ရဲစခန်းသူခိုးအပ်တဲ့ ရွာလူကြီးအားလုံးမျက်နှာက
သူခိုးမှန်းသိသွားသောကြောင့် သူခိုးကိုရဲစခန်းပို့လိုက်သည်.ငပွေးသည် ဘွဲ့တစ်ခုရ၏ ရွာမှာပြောပါတယ်။ ဒီအချိန်မှစပြီး ဒေါ်မှင်ရဲ့သား ငပွေးအား တစ်ရွာလုံးက နာမည်ပြောင်းခေါ်ကြသည်။
လေးဘက်ထောက် ငပွေး ဟူသတဲ့...
ခုချိန်ထိ ပို့(စ်)လေးတွေဖတ်ပြီး ခြေရာတွေ ချန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရော မချန်ခဲ့ကြတဲ့ ဘလော့မောင်နှမတွေအားလုံး ကျန်းမာ ပျှော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ဆိုတော့ ပြန်တဲ့သူတွေက မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့ ပြုံးပျော်နေကြသလို။
မပြန်ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ အိမ် လွမ်းစိတ်နဲ့ အိမ်ကိုလွမ်းနေကြမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ ဆွေလေး လိုပေါ့။
ဒီတော့ ဘလော့မောင်နှမတွေရဲ့ လွမ်းနေတဲ့ စိတ်လေးတွေကို အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် ပို့(စ်)လေးတစ်ခုလောက် ပြောင်းပြီး ရေးကြည့်မိတယ်။
ဖတ်နေတဲ့ အချိန်ရယ် ဖတ်ပြီးသွားလို့ တဒင်္ဂဖြစ်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေး ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်.. ဘလော့မောင်နှမများကို
ဘလော့ အိမ်မလည်ဖြစ်တာကြာလို့ လာဘ်ထိုးတာ အိုကေတယ်လို့ မှတ်ယူလိုက်ပါ့မယ်.
ပြီးတော့ ရေးသားချက်များမှာ တစ်ခုခုလိုနေတယ်ဆိုရင်လဲ သည်းခံပေးပါလို့ ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါရစေ။
ပုံလေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း internet ကရှာပြီး သုံးထားတာ။
(သူရ) ငါနင့်ကို ပြောမပြတတ်လောက်အောင် ချစ်တယ် ဖြူ။ ဘာလို့ချစ်လဲလို့ပြန်မပြောနိုင်လောက်အောင် နင်ငါ့ရဲ့ စိတ်တွေကိုပိုင် ဆိုင်သွားတာ။ ငါ့ကိုယ်ငါတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဘယ်အချိန်ထဲက ဒီလိုငါပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာ ငါကိုယ်တိုင်ကို မသိခဲ့ဘူး။ အရမ်းအံ့သြဖို့ ကောင်းတယ်။ ဖြူ .. နင်ရော အဲလိုပဲလားဟင်..
ကောင်လေးက အားတက်သရောမေးနေ ပြောနေခဲ့သော်လည်း ကောင်မလေး၏ မျက်နှာတွင်တော့ ဘာခံစားချက်တွေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ဖတ်လို့မရလောက်အောင် ကောင်မလေး၏ အမူအရာတွေက အေးစက်လွန်းနေသည်။ ကောင်လေးက ဒီလိုမေးတော့မှ ကောင်မလေး သက်ပြင်းမျှင်းမျှင်းလေး တစ်ချက်ကို ကြိတ်ရှိုက်လိုက်ပြီး
(ဖြူ) အင်း ဒီလိုပဲပေါ့။
အသက်မပါလွန်းလှစွာ အဖြေစကားက အေးတိအေးစက်နိုင်လွန်းနေသည်။ တစ်ကယ်တော့ လောကကြီးသည် ကိုယ်မျှော်လင့်ခဲ့သော တောင့်တခဲ့သော အချိန်တွင် မည်သို့ပင်ဆန္ဒတွေပြင်းပြ ခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်မျိုးတွင် မျှော်လင့်ချက်ဟူသည် ရောင်နီသန်းလာတာကိုပင် အိမ်မက်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော် .. မျှော်လင့်ချက်တွေလက်ပန်းကျ ခံစားမှုတွေကို ရိုက်ချိုး ဖြစ်လာတာတွေ ရလာတာတွေကို စိတ်အားနှစ်သိမ့်ခဲ့ချင်းဖြင့် တည်ငြိမ်လာချင်းလော အေးစက်သွားချင်လော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရခက်ခဲသော အခြေအနေတွင်မှ မိမိလိုချင်ခဲ့သော မိမိတောင့်တခဲ့သော မျှော်လင့်ချင်းတို့အား ရုတ်တရက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရလိုက်ကြသော် အခါ..
ခုလဲဒီလိုပါပဲ။ သူရ ဆိုသောကောင်လေးနှင့် ဖြူဆိုသော ကောင်မလေးတို့တွင် ဖြူ သည် မျှော်လင့်ချင်းအိမ်မက်တွေကို တောင့်တခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူရသည် မျှော်လင့်ချင်းအိမ်မက်တို့၏ အရှင်သခင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ဖြူဆိုသော ကောင်မလေးသည် အနေအေးလွန်းသည်။ သူမကိုကြည့်လျှင် အစဉ်အမြဲ သနပ်ခါးပါးကွက်ကြားလေးနှင့် မလှလွန်းသော်လည်း ဖြူစင်ရိုးသားမှုဖြင့် အေးချမ်းစွာနေလွန်းသူဖြစ်သည်။သူမသည် တစ်သက်မှာတစ်ယောက်သောသူဖြစ်သော သူမ၏ချစ်သူကောင်လေးကိုသာ ချစ်ခဲ့သည် နားလည်ခဲ့သည် အရာရာကို သည်းခံချင်းတို့ဖြင့် ချစ်သူကောင်လေး၏ စစ်မှန်သော ချစ်ချင်းတို့အား ဖြူဆိုသော ကောင်မလေး မျှော်လင့်ခဲ့မိသည်။ သို့သော် နှလုံးသားလမ်းကြောင်းတွင် ကျွန်းခံနေသူတို့၏ မူအရ ဖြူ သည် သူချစ်ခဲ့သော ကောင်လေးနှင့် ချစ်သူဖြစ်ပြီး
နောက်ပိုင်းတွင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲချင်းဟူသည် ဖြူ့ အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုနီးနီးသာ ဖြစ်လာလေတော့သည်။
(အိခင်)"ဖြူ ရှင့်လူကို ကြည့်ပြောအုန်းနော်။ ကျုပ် ဟိုတစ်နေ့က မြို့ထဲမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ချင်းတွဲလို့ ပျော်လို့ ပါးလို့နော်"
(ဖြူ) အင်း... အိခင်ရယ် ငါကမှသူ့က မစွန့်လွတ်နိုင်သေးတာ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဟာ။
(အိခင်) ဟဲ့ နင့်ကိုခွဲခိုင်းတာမှ မဟုတ်တာ။ကြည့်ပြောဖို့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ခိုင်းဖို့အဲဒါကိုပြောတာလေ။ ဖြူရယ် နင့်အစားတော့ ငါတော်တော်ရင်လေးတယ်သိလား။
(ဖြူ)အေးပါ အိခင် ရယ်နင်ပြောတာ ငါနားလည်ပါတယ်။ပြင်လိုက်လို့ ချစ်ရမှန်းသိလာတဲ့ သူရကိုမလိုချင်ဘူး။ ချစ်လို့ပြင်လာတဲ့ သူရကို လိုချင်တာ။ ငါပြောလိုက်ပေမယ့် သူက နောက်ကွယ်မှာ လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာမျိုးကိုလဲ ငါမလိုလားဘူး။
(အိခင်) အေး..ဒေါ်ဖြူနှင်း နင့်အစားငါတို့က ဒေါသထွက်လို့ပြောနေတာ။ နင့်လူက လွန်ကိုလွန်းလွန်တယ်။ ဒီလိုသာနင်လုပ်နေလို့ကတော့လေ သူများနောက်ကိုပါသွားမှာအမှန်ပဲ။ ဒါဆိုနင်သူ့ကိုမယူတော့ဘူးပေါ့။ မရလဲနေပစေပေါ့။ အလိုလား ..ဒါဆိုလဲဟယ် ခုထဲက လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့လား .ဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲခံနေသေးလဲ..
(ဖြူ) အင်း အဲဒါကတော့ ပြန်ဖြေရခက်တယ်ဟ။ တစ်ကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ လက်ထက်ထိမ်းမြှားချင်းမှာ အများဆုံး အဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် လဲဟာ တစ်ကယ်တမ်းလက်ထပ် ကြပြီဆို စိတ်ဆင်းရဲရမှာကို ကြိုသိနေတာပဲလေ။ ဒီတော့ ငါနားလည်တဲ့ အချစ်ဆိုတာက ပိုင်ဆိုင်လိုချင်းက အဓိကမကျတော့ဘူး။ပြီးတော့ ခုချိန်မှာ ငါသူ့ဘေးနားမှာရှိချင်သေးတယ်။ ဒါကြောင့်..
(အိခင်) ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးး.. အေးလေ နင်ကျေနပ်ရင်ပြီးတာပါပဲ ဖြူ ရာ။ ဖြူ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် ဖြူလွမ်းလွန်း ဆိုပြီး
စာရေးဆရာမလုပ်စားပါလား။ ဟွန်း.. အမြင်ကိုကတ်တယ်။
အိခင် သည်လဲ သူ့သူငယ်ချင်းမလေး၏ အဖြင့်ကိုကြည့်ရင်း အားမလိုအားမရဖြင့် ရွှဲ့ပြောနေသေးသည်။ တစ်ကယ်တော့ အိခင်မှန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ကောင်မလေး ဒီလိုချစ်ပေးနေသည့်ကြားမှပင်..တစ်နေ့
(မိန်းကလေး) ဒီက မဖြူနှင်းဆိုတာလားမသိဘူး။ ကျွန်မခဏလောက် ၀င်ထိုင်မယ်နော်။
(ဖြူ) အော်..အင်းထိုင်လေ ညီမ ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲမသိဘူး။
(မိန်းကလေး) ကျွန်မနာမည်က သင်းသင်း ပါ။ (မောင်)ကိုသူရ ရဲ့ချစ်သူဆိုပါတော့။ ဒီတော့ မောင့်ရဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မောင်နဲ့ဝေးဝေးနေပေးဖို့လာပြောတာ။ ယောက်ကျားမရှားပါဘူး မဖြူနှင်းရယ်..
(အိခင်)ဒီမှာ မသင်းသင်း..စကားကိုကြည့်ပြောပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင် ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်နော်။
(ဖြူ) နေနေ အိခင် ဖြူပြောလိုက်မယ်။
ဖြူ အိခင်ကိုဝင်ဟန့်လိုက်ရင်း သင်းသင်း ဆိုသောကောင်မလေးကို သနားသလိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်..
(ဖြူ) ညီမသင်းသင်းနော်။ ညီမကို အစ်မတစ်ခုလောက်ပြောပါရစေ။ အစ်မပြောတာကိုတော့ ဆုံးအောင်နားထောင်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေနော်။ ညီမရယ် တစ်ကယ်တော့ ညီမလေးပြောသလို ယောက်ကျားမရှားဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ ညီမလေးနားလည်ထားဖို့က ဘယ်တော့မှ တို့မိန်းကလေးတွေအချင်းချင်း ယောက်ကျားတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ရန်သူတွေမဖြစ်ကြစေနဲ့။ တစ်ကယ်ဆို အပြစ်ရှိသူက တို့တွေမှ မဟုတ်တာ။ အစ်မ သူရ နဲ့ခပ်ဝေးဝေးနေပေးပါ့မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့..
(ဖြူ) ငါ သူရနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေပြီး ချစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတော့မယ် အိခင်။ ငါက ချစ်တတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်။
စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေသေးတာကိုး။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်း ဖြူသည်.. သူရ ဆိုသော ကောင်လေးနှင့် ခပ်ဝေးဝေးသာ နေခဲ့လေသည်။ခုတော့ သူရဆိုသော ကောင်လေးသည် ဖြူရှိရာ ရောက်လာပြီး သူဘယ်လိုချစ်မိခဲ့သော် သူဘယ်လိုမှ မခန့်မှန်းမိခဲ့သော်..သူဘယ်လိုမှ မသိခဲ့သော် အကြောင်းများအား ဖြူ သိအောင် အားတက်သရော ပြောဆိုနေခဲ့လေသည်။
(သူရ) ဖြူ ..ကိုကြည့်ရတာ အသက်မပါသလိုပဲ။ ဘာဖြစ်နေတာလဲဟင်။ ဖြူ ဖြစ်စေချင်သလို ကိုယ်ချစ်တတ်လာပြီလေ..
(ဖြူ) သူရ .. လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ယုံကြည်မှုတွေကို ရိုက်ချိုးပြစ်ခဲ့ပြီး ပြန်ဆက်လို့ရနိုင်ပါတော့မလား။ ခုဆိုနင်သတ်ခဲ့လို့ ငါ့စိတ်တွေ သေသွားခဲ့တာကြာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါ....နင့်ကိုချစ်နေသေးတယ် သူရ။
ဒါ....ပေ....မယ့် ငါနင်နဲ့ ဝေးဝေးမှာနေပြီချစ်ရတာ ချစ်နေရတာကို ငါပိုနှစ်ခြိုက်မိတယ်။..
(သူရ) ဖြူ ..အယူခံမဟုတ်ပေမယ့် မုန်းတယ် လို့ တစ်ခွန်းလောက်တော့ ပြောသွားပါလား ဖြူ
ကောင်မလေး ပြောဖို့ အားယူလိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းလေးများ ပွင့်ဟလာသည်။
(ဖြူ) ဟင့်အင်း မမုန်းဘူး ချစ်နေစဲပဲ
ပြီးတော့ ကောင်မလေး သည် ကောင်လေးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ကျောခိုင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့
သူရ နဲ့ဝေးရာသို့တစ်ဖြည်းဖြည်း...... ဖြည်းဖြည်း...ကျောခိုင်းထွက်ခွာသွားသည်မှာ..နောက်ဆုံး သူရ ရဲ့ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ဆုံးသွားသည်အထိ..............
သို့ဆိုလျှင် သူရ ကရော....
ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများပြောနေကြသည်။ သူရ သည် အရက်၏ကျေးကျွန်ဖြစ်လို့နေသည်။ အကြောင်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့် ဟုဆိုကြသေးသည်။ ပြီးတော့ ထိုမိန်းကလေးသည် ဘာမှမဟုတ်ပဲ သွေးကြီးကာ မာနကထောင်လွှား လွန်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၄င်းအပြင် သူရ သည် ထိုမ်ိန်းကလေး အပေါ်တွင် အလွန်ပင် ချစ်မြတ်နိုး ကြောင်းလဲ ပြောနေကြသေးသည်။
သို့ဆိုကလျှင် ..သင်းသင်း ဆိုသော မိန်းကလေးကရော..
လူတိုင်း လူတိုင်း တွင် အချစ်နှင့်ပတ်သတ်သော အချစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ခံစားမှုလေးတွေ ကိုယ်စီတော့ရှိနေကြစမြဲပင်။တစ်ချို့က ပိုင်ဆိုင်လိုသည်။ တစ်ချို့က ပေးဆပ်လိုသည်။ တစ် ချုိ့က ပျော်ရွှင်လိုသည်။ တစ်ချို့က ပေါက်ကွဲလွယ်ကြသည်။ တစ်ချို့က အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားယူကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ..အချစ် ဟူသည်.. သီအိုရီ သာလျှင်ရှိပြီး အဖြေထွက်ရန်သည်ကား အလွန်ခက်ခဲသော ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဟု ပင် ဆိုမိချင်တော့သည်။
ခုတစ်လော ဘလော့ရေးတာ ကျဲသွားတာကတော့ မအားလပ်လို့ပါ။ ဘလော့အိမ်လည်မထွက်ဖြစ်တာမို့ ဘလော့မောင်နှမများအား လုံးကိုလဲ သတိရနေပါတယ်လို့။ နောက်တစ်ပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်ကြရင်တော့ ဘလော့ အိမ်လည်ထွက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်လို့။။။
ဒီပို့(စ်)လေးကတော့ ဆွေလေး ဟိုးအရင်ကရေးခဲ့ဘူးတဲ့ တစ်ခုပါ။ ခုတစ်လော အလုပ်တွေ တော်တော်များနေလို့ ဘလော့ကိုလည်း လှည့်မကြည့်နိုင် အလည်အပတ်တွေလဲ မလာနိုင်တာကို နားလည်ပေးကြပါလို့ ပြောရင်း မပြတ်သော သံယောဇဉ်နဲ့ ၇ုံးကနေပြီး တင်ပြီးသား အဟောင်းပို့(စ်)လေးတစ်ခုကို ဆွေလေး ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပို့(စ်)လေးကို ဆွေလေးကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တိုင်း စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခု ကျန်ခဲ့သလို ပြန်ခံစားမိလို့ပါ။